Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Wizz Air Capacity Ramp-Up dia mety hitondra voankazo
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Hongria • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Miaraka amin'ny ankamaroan'ny firenena eropeana mamela ny fidirana tsy voafetra ho an'ireo mpandeha vaksiny tanteraka, ny kaontinanta dia natao ho an'ny fangatahana avo kokoa noho ny fitokisan'ny fahatokisan-tena mandritra ny fotoana fohy, izay tsara ho an'ny kaompaniam-pitondrana eropeana centric.
Wizz Air dia mikendry ny hiasa amin'ny fahaizan'ny pre-pandemia mandritra ny volana aogositra.
Ny sidina mora vidy dia napetraka ho takiana.
Wizz Air dia mety ho toby herinaratra eropeana amin'ity fahavaratra ity.
Ny filokana an'i Wizz Air amin'ny fidirana amin'ny fifamoivoizana eropeana dia afaka mandoa dividends ho an'ilay mpitatitra. Ny sidina mora vidy dia kasaina hatao, ary ny mpitatitra vidiana lafo indrindra dia mety ho toby famokarana herinaratra eropeana amin'ity fahavaratra ity.
Wizz AirNy saran-dàlana ambany dia takiana satria mikasa ny hiasa amin'ny fahaiza-manao mialoha ny areti-mandringana mandritra ny volana aogositra. Ny fitsapan-kevitra tato ho ato dia nanasongadina ny toerana matanjaka entin'ireo mpitatitra vola lafo amin'ny fakana ny fangatahana mihoampampana, satria ny 52% n'ireo mpamaly manerantany dia nanisy vidiny / sanda ho laharam-pahamehana indrindra rehefa nisafidy marika kaompaniam-pitaterana an'habakabaka.
Wizz AirNy sarany ambany sy tambajotra midadasika dia hahatonga azy io ho iray amin'ireo mpandraharaha manintona indrindra amin'ity fahavaratra ity. Miaraka amin'ny ankamaroan'ny firenena eropeana mamela ny fidirana tsy voafetra ho an'ireo mpandeha vaksiny tanteraka, ny kaontinanta dia natao ho an'ny fangatahana avo kokoa noho ny fitokisan'ny fahatokisan-tena mandritra ny fotoana fohy, izay tsara ho an'ny kaompaniam-pitondrana eropeana centric.
Ny fanadihadian'ny mpanjifa farany (Q2 2021) dia tsy nampiseho afa-tsy fihenan'ny 2% ny olana ara-bolan'ny mpanjifa, ary ny 85% amin'ireo mpamaly manerantany dia mbola "tena", "kely", na "somary" miahiahy momba ny toe-bolany manokana, raha oharina amin'ny 87% tamin'ny fanadihadiana Q1 2021.
Manerana ny H1 2021, mijanona ho tsy miova ny toerana ara-bola maro an'ny mpandeha. Ny mpitsangatsangana dia mety hitady safidy safidy mora indrindra ao anatin'ny fotoana fohy mba hitsitsiana vola satria mijanona eo ny teti-bola. Ny fiverenan'i Wizz Air mahery dia mety hamoa. Amin'ny fiverenana amin'ny fahaiza-miasa tena akaiky, ny mpandeha dia ho simba amin'ny safidy, ary ny Wizz Air dia ho lasa mpitatitra fanta-daza amin'ny tamba-jotra midadasika amin'ity fahavaratra ity. Mpifaninana maro, toa an'i Alitalia sy Norvezy Air Shuttle, no nampihena ny sidina, ary nisintona ny tsena, namela banga izay manome ny Wizz Air fotoana voalohany hananganana fanekena marika sy ho lasa mpandresy amin'ny areti-mandringana.